घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
October 5, 2020 1640
नेपाली बजारमा आज पहँेलो धातु सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । आइतबार प्रतितोला रु ९४ हजार ५०० मा कारोबार भएको छापावाला सुन आज प्रतितोला रु ९४ हजार १०० मा कारोबार भएको छ । आइतबारको तुलनामा छापावाला सुन रु ४०० ले घटेको हो ।
यस्तै चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आइतबार प्रतितोला रु एक हजार रु एक हजार १८० मा कारोबार भएको चाँदी आज पनि सोही मूल्यमा नै कारोबार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ । (रासस)
Prevसंक्रमितको संख्या आज पनि उच्च, कुन जिल्लामा कति थपिए ? हेर्नुहोस्
Next१०१ वर्षिया वृद्धाले जितिन् कोरोना, उनले खाइन् यस्ता घरेलु औ’षधि…